Maxamed Macalin Miskiin [Seedi], oo la Sheegay in uu Baabuur ku Galay Dalka Koonfur Afrika – Rasaasa News
Feb 26, 2011 dambiile, Eritrea, ethiopia ppeace, Jwxo-shiil, Maxamed Macalin Miskiin [Seedi], ogaden peace, oo la Sheegay in uu Baabuur ku Galay Dalka Koonfur Afrika
Garrissa, Feb 26, 2011 [ras] – Maxamed Macalin Miskiin [seedi], oo ay Walaalo yihiin xaaska Jwxo-shiil, Sahra Macalin Miskiin, oo ay Booliska dalka Kenya si wayn u baadigoobayeen, ka dib kolkii la xaqiijiyey in uu ka dambeeyey dilkii Sheekh Maxamed Dubad Xirsi, oo laba todobaad ka hor ay dablay ku dishay gurigiisa dhexdiisa magaalada Garrissa ee dalka Kenya.
Seedi, oo ay Booliska Kenya sawiradiisa dhigeen xuduuda iyo garoomada diyaaradaha ee dalka, ayaa si dhuumaal ah ku baxsaday Baabuur, isaga oo sita warqada Aqoonsiga ee dalka Kenya. Waxaana la xaqiijinayaa in uu gaadhay dalka Koonfur Afrika, lama oga in uu uga sii gudbi doono dalka uu degan yahay ee Canada iyo in uu dhuumaal ku joogi doono dalka Koonfur Afrika, halkaas oo dukaan weyn oo ganacsi ay shirko ku yihiin Seedigiis.
Wararka ka imanaya dalka Kenya, waxay sheegayaan in sawirkiisa iyo magaciisaba ay Booliska Kenya geeyeen Safaarada Canada ee Nairobi[Canadian High Commissioner in Nairobi].
Dalalka qaar baa waxaa u dhaxeeya xidhiidh ah in la isu celiyo dadka dambiileyaasha ah, mana hubno in xidhiidhkaasi uu u dhaxeeyo Kenya iyo Canada.
Waaraka aan ka helayno dalka Kenya, waxay sheegayaan in ay jirto dareen xoog leh oo ku aadan Jwxo-shiil, beeshiisa iyo beel kale oo aad u taageeri jirtay kooxda budhcada ah ee ay Eritrea soo abaabusho in ay saaran yihiin indhaha dawlada Kenya.
Hore ayuu R/wasaaraha Itobiya uu u cadeeyey in ay jiraan qabaa,il yar oo taageera budhcada Eritrea ee Jwxo-shiil, kuwaas oo hadii ayna joojin taageerada budhcada wax laga qaban doono.
Jwxo-shiil, oo si qarsoon magac Jabhadeed ugu dilay dad badan oo hal beel ka soo jeeda, ayaan waligii maanta ka hor beeshaasi isku raacin in uu ujeedo u laynayo masuuliyiinta beeshaas. Todobaadkan dhamaadkiisii ayey beeshaasi isku raacday in Jwxo-shiil, dilalkii uu gaystay oo dhan ay ahaayeen kuwa hal ujeedo leh, waxaana kashifay kuwii qarsoonaa ee awal laga shakisanaa dilkan uu gaystay sidigiis oo gacan yare u ah ayna isku beel yihiin.
Hadaba, su,aasha isweydiinta leh waxay tahay, Halyeeyadiidii iyo mushaa,ikhdii ayna dilalkoodu qarsoonayn ee uu Jwxo-shiil, beel aahaanta u laayey Beeshiisu magdhaw ma ka bixin doontaa?
Boqol Qof oo Beesha Reer Warfaa ah, oo Baaq ka Soo Saaray Dalka Koonfur Afrika